१६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ । यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।
तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढ्ने
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले संशोधित बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैशाखदेखि तातेर विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएको अवस्थामा यसपालि कोरोनाको दोस्रो लहर जेठसम्म नै लम्बिने सम्भावना रहेकाले पुुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था सरकारको नरहेको अर्थविदहरुको ठम्याइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले एक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वृद्धिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको र दाताहरुसँग परामर्श भइरहेको बताए ।
गतवर्ष डा.युवराज खतिवडाको पहलमा दाताहरुले सहयोग दिएको र यसपालि अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेल बजेटमा भन्दा पार्टीको गतिविधिमा वढी सक्रिय भएकाले दाताहरुसँग परामर्श गर्न तुलनात्मक रुपमा सक्रिय नभएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुको छ । दातृ निकायसँग सहयोग र ऋण लिन नसके आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भनेर राष्ट्र बैंकलगायतसँग परामर्श भइरहेको बताइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ९७ हजार ९४९ छ। निजामती कर्मचारी १ लाखको हाराहारीमा छन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब साढे तीन लाख छ । सरकारले दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाएको थियो ।
हाल नेपालमा ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये वृद्धभत्ता २००० बाट बढाएर ३००० पु-याइए पनि अन्य भत्ता बढेको छैन। एमालेले गत आम निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको र अवको चुनावमा जाँदा यो प्रश्न उठ्ने भएकाले ५ हजार पुयाउनु पर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।
कोरोनाले थला पारेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइ आकर्षक आर्थिक वृद्धिदर बनाउन पनि बजेटमा दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्व, वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक ऋणको अवस्थाको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ ।
आव ०७८÷७९ को संघीय बजेट १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
भारतमा बालबालिकाहरुमा कोरोना खोपको परीक्षण सुरु
काठमाडौं । भारतले बालबालिकाहरुमा कोरोना खोपको परीक्षण सुरु गरेको छ । भारतमै बनाइएको कोभ्याक्सिन खोपको परीक्षण मंगलबारबाट थालिएको हो । पटनाका १२ देखि १७...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 27, 2021 0
काठमाडौं । स्थानीय प्रो शुक्रबहादुर राईले धरान ओपन गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । अन्तिम दिन १ अन्डर ६९ स्कोरसहित समग्रमा ४ अन्डर २...
Breaking News पूर्णभक्त दुवाल - April 2, 2020 0
भर्खरै पूर्णभक्त दुवाल - August 22, 2020 0
प्रदेश ३ पूर्णभक्त दुवाल - March 5, 2020 0
प्रदेश ५ पूर्णभक्त दुवाल - May 22, 2020 0
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - June 1, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि गठित इजलाशलाई लिएर चर्काे विवाद भएपछि र न्यायाधीशहरु समेत विभाजित...
Breaking News पूर्णभक्त दुवाल - February 9, 2021 0
प्रदेश १ पूर्णभक्त दुवाल - July 24, 2020 0
प्रदेश ५ पूर्णभक्त दुवाल - July 3, 2020 0
प्रदेश पूर्णभक्त दुवाल - October 9, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । जिल्लाका एक कोरोना संक्रमितको शुक्रबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि उपचारका क्रममा काठमाडौंस्थित...